Inhlangano ifuna ukusiza abadlali bebhola abasafufusa | News24
Inhlangano ifuna ukusiza abadlali bebhola abasafufusa
INHLANGANO engenzi nzuzo, Isiphiwosethu Organisation, yaseMbali ithi izimisele ukusiza abadlali bebhola abasakhula ukuthi nabo bagcine sebekwazile ukuphumelela kwezikanobhutshuzwayo.
Le nhlangano isungulwe eminyakeni emibili eyedlule.
Ngokusho kukaMnu Sandile Mngadi nongelinye lamalunga ayo uthe inhloso enkulu ukuthi basize abafana abancane abasakhula ukuthi bakwazi ukuthuthukisa ikhono labo ebholeni likanobhutshuzwayo.
Uthe le nhlangano ibhekelele abafana abadlala ibhola abeneminyaka ephakathi kweli-11 nengama-22 ubudala.
“Baningi kakhulu abafana ezindaweni esiphuma kuzona abanethalente lokudlala ibhola lezinyawo kuwukuthi abazi ukuthi esiphi isinyathelo ekumele basenze ukuze bezokwazi ukuthi balithuthukise ikhono labo.
“Thina njengenhlangano sifuna ukudlala indima yokuba yibhuloho elizokwazi ukuthi lixhumanise abafana laba abadlala ibhola nezinhlaka ezifanele lezo ezizobasiza ukuba bakwazi ukuthuthukisa amakhono abo kwezikanobhutshuzwayo,” kubeka yena.
Uqhube wathi nakuba kuyisifiso sabo leso njengenhlangano engenzi nzuzo bangalujabulela uxhaso ukuze bezokwazi ukuthi bathumele abadlali ezindaweni lapho kuyohlungwa khona abadlali emaqenjini amakhulu.
“Uma singakwazi ukuthi sithole abaxhasi singakwazi ukuthi sithumele izingane esizibonayo ukuthi zinethalente kanti futhi zizimisele ngezebhola uma ngabe kukhona ukuhlungelwa okukhona emaqenjini lawa amakhulu.”
UMnu Mngadi uthe abasizi nje kuphela izingane zaseMgungundlovu kodwa babheka isifundazwe sonke saKwaZuu-Natal.
Uma ngabe ufuna imininingwane egcwele ungathintana noMnu Sandile Mngadi enombolweni ethi 074 558 6933.